Recipes to make with Kids - Madadaalo, Fudud, iyo Hal abuur! | Bezzia
Xadgudubyada lagu sameeyo carruurta
Ma rabtaa inaad ku raaxeysato daqiiqad qoys? Markaa wax la mid ah inaad naftaada u ogolaato in lagaa qaado Xadgudubyada lagu sameeyo carruurta. Sababta oo ah kuwa yaryar ee guriga jooga waxay lahaan doonaan daqiiqad madadaalo ah oo keligood ma noqon doonaan. Waa run in ay heystaan ​​waxyaabo badan oo ay ku maaweelin karaan naftooda, laakiin jikada sidoo kale waa mid ka mid ah meelaha ay ku dhex milmi karaan iyo aad iyo aad u badan.
Sababtoo ah waxaa jira cuntooyin badan oo aan ku sameyn karno carruurta sidii jilaayaal. Tallaabooyin fudud sida cajiinka, oo aad jeclaan doonto. Waxaa intaa dheer, waxay cuni doonaan abuuritaankooda goor dambe, taasina marwalba way ku qanacsan tahay. Haddii aad raadineysay madadaalo iyo fikrado fudud, markaa ma seegi kartid wax kasta oo soo socda, maxaa yeelay waxaad jeclaan doontaa kuwa yaryar, xitaa inbadan. Ma bilaabi karnaa?
1 Cunnooyinka fudud ee carruurta dabka la'aan
1.1 Keeg lagu sameeyay rooti la jarjaray
1.2 Fajitas qaar ka mid ah
1.3 Khudradda miraha
1.4 Muuji keega shukulaatada
2 Cunnooyinka raaxada leh ee carruurta
2.4 Gunno moos ah
3 Cunnooyinka qadada ee carruurta
3.1 Ukunta ubax-sanka ah
3.2 Puffizer appetizer oo leh qaabab xiiso leh
3.3 Reindeer Rudolf saxankaaga
3.5 Waxaad sheegtaa misir qaabeeya
Cunnooyinka fudud ee carruurta dabka la'aan
Cunnooyinka fudud ee carruurta iyo kuleylka dhexdhexaadka ah waa mid ka mid ah fikradaha ugu fiican ee aan heli karno. Sababtoo ah waxaan ognahay inay iyaga u tahay ciyaar, baashaal ku jira jikada. Sidaa darteed, waa inaan markasta ka fogaanaa khataraha qaarkood sida dabka. Sidaas, waxaan u kariyeynaa taxane ah cunnooyin fudud oo macaan oo loogu talagalay kuwa yaryar iyo kuwa yaryar. Intaas waxaa sii dheer, uma baahnaan doonaan cunto karin, sidaa darteed weli waxay noqonayaan kuwo wax ku ool ah. Si fiican u fiirso dhammaantood!
Keeg lagu sameeyay rooti la jarjaray
Waa saxan qabow oo aan wada ognahay. Intaa waxaa dheer, maadaama ay ka kooban tahay dhowr lakab, waa tan ugu fudud in la sameeyo. Kani waa ciyaartii ilmaha sidaa darteedna, waxay noqon doonaan kuwa sida ugu badan uga sameeya keeg sidan ah. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay caaryo cabbir ah inta aad rabto, had iyo jeer waxay noqon doontaa xulashadaada waxayna kuxirantahay martida. Kadib, waxaan ku dabooli doonnaa gunta jeexjeexa rootiga la jarjaray. Waxaad ku fidin kartaa lakabyada isku dar ah jiis iyo tuna, ku dar ukun la kariyey oo la jarjaray ama qajaar iyo saladh, wax alla wixii aad ugu jeceshahay!. Waxaan dhigeynaa lakab kale oo rooti ah, mar labaad ayaan buuxinay waxaana ku dhameyneynaa lakab cusub sidoo kale rootiga. Waxaad ku qurxin kartaa majones, xabbad saytuun ah oo dhadhamin diyaar u ah.
Fajitas qaar ka mid ah
Xaaladdan oo kale Haa, naftaada jikada waxad ku sameysan kartaa jikada, si markaa hadhow ay kaliya u buuxiyaan fajitas-ka. Kaliya adoo iibsanaya xoogaa hadhuudh ah oo hadhuudh ah oo aan ka fekerayno qaar ka mid ah maaddooyinka buuxinaya, wax ka yar 5 daqiiqo waxaan lahaan doonnaa saxan qabow oo dhadhan fiican leh oo ay kuwa yaryar isu geyn doonaan oo ay ku dhadhamin doonaan iyagoo dhoola cadeynaya.
Si ay ugu cuni karaan miro macmacaan ama cunno ahaan, waxba uma ogolaato inay u diyaargaroobaan qaar ka mid ah skewers guuleysta. Waxaad ka iibsan kartaa qaar ka mid ah ulaha qoryaha oo alwaax ah, adoo kormeeraya, u oggolow kuwa yaryar inay soo saaraan miraha ay jecel yihiin Dabcan, waxa ugu fiican ayaa ah inaad horey midhaha u kala jartay, gaar ahaan haddii aan ka hadalno xaqiiqda ah in carruurtu yar yihiin si ay iyagu isu gooyaan Fikrad noqon karta dhadhan wanaagsan oo midab leh isla waqtigaas!
Muuji keega shukulaatada
Xaqiiqdii waad ogtahay canjeerada wareega ee ay ku iibinayaan dukaan kasta. Hagaag, waxay noqon doonaan saldhigyada waaweyn ee keega. Intaas waxaa sii dheer, waxaad u baahan doontaa kareem shukulaatada aad dooratay waana intaas. Hadda, sida keega rootiga, waxaan u baahan doonnaa lakabyo. Canjeero aan ku buuxin doono kareemka shukulaatada sidaa darteedna, waxaan sameyn doonaa lakabyo. Ugu dambeyntiina, waxaan dhammeyn doonnaa faafinta shukulaatada labadaba dusha iyo dhammaan keegga dushiisa. Ku qurxin shukulaato ama macmacaan midab leh iyo hadda waxaad heli doontaa keeg shukulaato macaan daqiiqado yar gudahood iyo foornad la'aan.
Cunnooyinka raaxada leh ee carruurta
Cunto kariska carruurta waxaan ku qaadan doonnaa mid ka mid ah xilliyada ugu xiisaha badan iyo kuwa madaddaalada badan. Haa, u diyaargarow inaad hadhow ka soo ururiso bur iyo waxyaabo kale qaybaha ka muuqda oo dhan lagana yaabo qaar aan sidaa u muuqan. Laakiin qofna ma qaadi doono daqiiqadda aan ku noolaannay. Waxay jecel yihiin inay qurxiyaan, cajiimaan oo ay joogaan dhammaan tallaabooyinka sharaxaadda. Sidaa darteed, qaybtaan waxaan ku soo xulnay cuntooyinkaas ay la sameynayaan carruurta ay jeclaan doonaan, maxaa yeelay waxay leeyihiin wax walba oo la soo sheegay iyo in ka badan.
Yaan jeclayn inuu sameeyo pizza iyo in ka badan, cuno? Waa hagaag, carruurta sidoo kale. Sidaa darteed, waxaan ku sharadnaynaa xoogaa pizza ah guriga. Haddii aad iibsato saldhigyada la sameeyay, waxaad kaliya ku dabooli doontaa wax kasta oo aad ugu jeceshahay, sida yaanyo yar, jiis, saytuun, qaar khudaar ah ama digaag dillaac qabow., iyo kuwo kale. Haddii aad cajiinka sameyso, aad bay ugafiican tahay, maxaa yeelay waad u ogolaan doontaa iyaga inay ku darsadaan biyaha ama burka oo aad cajiintid. Waxaad arki doontaa sida ay ugu habboon tahay iyaga!
Waa nooc nacnac ah laakiin lagu sameeyay gacmaheenna. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad ku xoqdo qaar ka mid ah muufada baaquli weyn. Kadib, waxaad ku dari doontaa jiis kareem waana inaad u jilcisaa ilaa natiijo is haysta ay ka harto. Laga soo bilaabo cajiintan, waxaan ka qaadaneynaa qaybo yar yar, oo aan ku sameyn doonno kubbado ama aad u kala qaadi kartid hadba sida aad u kala jeceshahay. Dhinaca kale, waa inaad dhalaalisaa shukulaatada cad oo aad ku dartaa midabaynta cuntada si aad u abuurto midabyo kala duwan. Si loo sameeyo keega-pop-keega waxaan u baahanahay ulo qaar, oo u macaan noqon kara sida Mikado ama ulaha lafaha. Waxaan ku qoynay dusha sare shukulaatada dhalaalay oo waxaan gujineynaa kubadaha cajiinka ah ee aan sameynay. Hadda waxay u hartay oo keliya in la qoyo kubbadda oo dhan oo lagu qurxiyo midab buuxa leh xiirashada ama baastada shukulaatada. Sug inay si fiican u qalalaan waxaadna la raaxeysan kartaa qoyska oo dhan.
Kukiyada dubista ayaa ah mid ka mid ah hiwaayadaha waaweyn ee aan u heyno kuwa yaryar. Maxaa yeelay siinta iyaga qaabab waa mid ka mid ah fikradaha iyo macmacaan fudud carruurta. Marka hore waxaan dhalaalaynaa illaa 150 garaam oo subag ah waxaanan ku qasnaa 100 garaam oo sonkor ah. Ku dar laba ukun oo dhexdhexaad ah iyo wax yar oo vanilj ah. Wax walbana si fiican ayaan isugu dhafanay oo waxaan sifeynaa 240 garaam oo bur ah. Hadda waxay u hartay oo keliya inay gacmahaaga wasakh ka dhigto cajiinka. Kadib way samayn karaan kubbado waxayna qaabayn karaan ama isticmaali karaan wax gooye, taas oo ku xidhan dookhaaga. Qurxin oo dub.
Gunno moos ah
Laga soo bilaabo marka shukulaatada ay ka muuqato dhexda, waxay had iyo jeer noqon doontaa mid kale oo ka mid ah cuntooyinka ugu qosolka badan ee carruurta lala sameeyo. Xaaladdan oo kale, waa jar labo moos ah xaleef aan aad u dhuubanayn. Dhinaca kale, waa inaan ku dhalaalayno shukulaatada baaquli ku jirta weyn. Hada waa inaad jeex kasta galisaa shukulaatada dhalaalay si ay si fiican ugu daboosho. Waxaa lagu dhex tuurayaa saxaarad gooni ah. Waan u qurxin karnaa sidaan jecelnahay iyo qaboojiyaha. Natiijadu waa mid cajiib ah!
Cunnooyinka qadada ee carruurta
Hadda waxaan u sameyn doonnaa iskudhaf habboon kuwa yaryar ee guriga ku jira. Sababta oo ah waxaan horay u soo aragnay sida ay u fududahay in wax lagu karsado kuwa yaryar iyo u samee cunnooyinka cuntada lagu kariyo. Xaaladdan oo kale, iyaguna way naga caawin karaan, dabcan, laakiin waxaan diiradda saari doonnaa waxoogaa yar fikradaha karinta ee carruurta aan rabin inay wax cunaan wax walba. Yihiin fikradaha ay carruurtu cunaan si caafimaad leh. Sidaa awgeed waxaan ku raaxeysan doonnaa natiijo hal abuur leh oo furaysa dhammaan dareenkaaga iyo caawimaaddaada. Maxaan kaloo weydiisan karnaa?
Ukunta ubax-sanka ah
Cunto macaan, fudud oo dhakhso leh. Si tan loo sameeyo, waa inaad karisaa ukunta oo markay qabow ku dhowdahay, ka fiiq oo saxaarad noo dhig. Hadda Yaanyo cherry ah kala goy nuskeedna gasho koofiyad. Waxaad ku rushayn kartaa xabbad ukumo ukunta yaanyada waana intaas. Waad raaci kartaa weelkan saladh yar waxaadna xasuusataa inay fiicantahay hadii ukunta aysan weyneyn natiijo fiican.
Puffizer appetizer oo leh qaabab xiiso leh
Waad ka fikiri kartaa xayawaanka qaarkood iyo recortar buskud yar oo wejigooda leh. Waxa ugu fudud ayaa ah in lagu sharaddeeyo salka wareegsan ee wejiga iyo laba ka yar oo loogu talagalay dhagaha. Dabcan, haddii aad rabto inaad sameyso midab doofaar, waxaad hor dhigan doontaa saldhig wareegsan. Waad ku dhejin kartaa gabalka buskudka adigoo xoogaa qoyan cajiinka. Waxaad siineysaa qaabka aad rabto, waxaad ku dari kartaa buuxin ama qurxin iyo foornada. Way jeclaan doonaan!
Reindeer Rudolf saxankaaga
Hadaad rabto inaad wax ka cunaan bariis cad, yaanyo dabiici ah iyo dhowr bolse, waxaad hadda sameysan kartaa saxanka qaab hal abuur leh. Si tan loo sameeyo, waxaad dhigaysaa bariiska aadka u wareegaya bartanka saxanka. Sanka, waxaan u isticmaali doonaa nus yaanyo cherry ah. Laba xabbadood oo saytuun ah ayaa indhaha u noqon doona iyo dib-u-dhisayaasha geedka yaryar sausages xoogaa furan kala badh.
Si ay iyaguna qudaarta qaar u cunaan, wax la mid ahi ma jiraan isku day inaad sameyso suxuun hal abuur leh. Iyaga laftoodu way ku caawin karaan. Xaaladdan oo kale, waxay ku saabsan tahay sharad ku sameynta jirka boqolleyda leh xaleef qajaar ah. Madaxiisu wuxuu mar kale noqon doonaa nus yaanyo cherry ah iyo lugaha, gogo 'karooto ah. Waxaad ku sameyn kartaa qorraxda dusha sare ee saxanka xoogaa galley ah.
Waxaad sheegtaa misir qaabeeya
Waxaan horay u aragnay taas cuntada sida loola sameeyo carruurta waxay noqon karaan kuwo hal abuur leh. Sidaa darteed, haddii aad aragto in kuwa yaryar ay yihiin kuwo aan aad u jeclayn misirta, waa inaad wax ikhtiraacdaa. Waxaad ku ridi doontaa saxan, bartamaha saxda ah, bariis yar oo la kariyey si afka loo sameeyo. Dhegaha orsigeenna, ukunta la kariyey kala badh, halka indhahana, gabal wareegsan oo ukun la kariyey iyo saytuun bartamaha. Sidan ayaanu nolol u siin doonnaa saxankooda iyaguna way noo mahadcelin doonaan. Waxaad horey u haysatay orso misir ah!
Kee ka mid ah cuntooyinkaan aad ku dhaqmi doonto carruurtaada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Recipes » Xadgudubyada lagu sameeyo carruurta
Siyaabaha ugu wanaagsan ee loo isticmaalo saliidda qumbaha